Biofertilizers kurwisa kuora kwevhu | Green Renewables
ChiGerman Portillo | 17/05/2022 19:25 | Environment
Zvekurima zvakawedzera kushandiswa kwefetereza yemakemikari mumakore apfuura kuitira kuti veruzhinji vawane chikafu chakasimba. Dambudziko remafetireza emakemikari aya nderekuparara kwevhu kwarinoita. Kuti ugadzirise matambudziko aya, shandisa biofertilizers. Aya ma biofertilizer anoedza kudzikisa kukanganiswa kwezvakatipoteredza kwekurima, kudzivirira kuparara kwevhu nekuvandudza kunaka kwaro.
Muchinyorwa chino tichakuudza kuti biofertilizers inoshandiswa sei kurwisa kuparara kwevhu uye kuti ndezvipi zvakanakira zvavanazvo pamusoro pechinyakare.
1 Biofertilizer kurwisa kuora kwevhu
3 Zvakanakira zvebiofertilizers
4 Misiyano mikuru
Kushatisa ivhu idambudziko rakakura uye riri kukura rinokonzerwa nekushandiswazve, kusatarisira zvakanaka uye kushandiswa zvisina musoro kwezviwanikwa. Zvinofungidzirwa kuti chikamu chinodarika makumi manomwe kubva muzana (70%) chevhu renyika raparadzwa mumuviri, makemikari kana kuti biologically Nekuda kwekurima kwakasimba, kusashandiswa zvakanaka kwezvekushandisa pakurima, kubviswa kwezvisaririra zvezvirimwa nekushaikwa kwefotereza yepasi, ivhu rayo rinoramba richiipa zuva nezuva.
Matambudziko makuru mukushatiswa kwechisikwa ichi ane chekuita nekukukurwa kwevhu, salinization uye kuderedzwa kweiyo organic stocks, pamwe ne kukanganisika kunokonzerwa nekuwandisa kwemichina yekurima. Izvi zvinoreva kuti pane dambudziko rekuderera kwemuviri. Masisitimu ekugadzirwa kwekurima ane zvakakosha pazvakatipoteredza, zviitiko uye kusiyana-siyana kwezvipenyu zvevhu. Kuvhiringidza uye kushandiswa kwezvinhu zvekurima zvakaderedza zvikuru nhamba uye nhamba yezvipenyu zvipenyu zvinogara imomo.
Mushure mekuchinja kwekushandiswa kwepasi mune ecosystems yepasi, huwandu hwemhando dzezvirimwa hwakaderedzwa zvakanyanya uye huwandu uye kunaka kwezviwanikwa zvavo inosiyana nemidzi midzi yakasiyana. Izvi zvinobva zvaita kuti ivhu ridzike organic matter, izvo zvinozoita kuti ivhu risasiyana zvipenyu uye kuwanikwa kwechikafu.
Zvichienderana nezviri pamusoro, panoda kugadzirwa matekinoroji anogona kuwedzera matura evhu, kuchengetedza mwando wevhu, kunatsa kushandisa fetereza, uye kuderedza kusvibiswa kwevhu nemvura. Zvidzidzo zvakawanda zvakaitwa pakushandiswa kwebiofertilizers senzira yekuvandudza mamiriro evhu uye kuwedzera goho. Zvakagumiswa kuti kushandiswa kwe fetiraiza yakanaka chaizvo kune kuvandudza mamiriro evhu kupihwa huwandu hwema microorganisms avainawo.
Microorganisms dzine maitiro akasiyana-siyana ayo kukurudzira kukura kwechirimwa kuburikidza nerhizosphere symbiosis, iyo inonyanya kukosha ndeye: kuwedzera kushandiswa kwezvokudya nemvura, kuiswa kwe nitrogen mumiti-ivhu system ne biofixation nemabhakitiriya erudzi Rhizobium, nezvimwewo.
Aya ma biofertilizer ari kuwana pasi pamusoro pefotereza yakajairika sezvo kukanganisa kwezvakatipoteredza kwakadzikira zvakanyanya. Kutenda nekushandiswa kwema microorganisms anokwanisa kuvandudza mamiriro evhu uye kunaka kwayo, zvinokwanisika kuwana kuvandudzwa kwegoho rezvirimwa pasina chikonzero chekukuvadza ivhu.
Mabhenefiti makuru anopihwa nebiofertilizers ndeaya:
Deredza kushandiswa kwemakemikari fetiraiza. Seimwe nzira kune mafetiraiza emakemikari, biofertilizers ine simba rakanaka kune zvakatipoteredza nekuderedza kushandiswa kweammonia mukugadzirwa kwemakemikari fertilizer, kuderedza kushandiswa kwesimba repasi rose.
Kusimudzirwa kwezvirimwa uye kuchengetedza ivhu. Kushandiswa kweutachiona uhwu kunobatsira kuorera kwevhu nembesa, kunodzivirira kukukurwa kwevhu uye kunofadza chimiro chakarurama chevhu.
Kuvandudza hutano hwekudya kwezvirimwa. Kushandiswa kwemhando iyi ye organic fertilizer kunogona kuwedzera kutorwa kwemiti yemiti, yakadai senitrogen, zinc kana phosphorus.
Vanobvumira kushandiswa kwemarara ehupenyu.
Goho rinowedzera ne30%. Kuvandudzwa kwekuchengetedza ivhu kunobatsira kuti zvirimwa zvikure zviri nani panguva yekuoma.
Varimi vakawanda havazivi nezvekugadzirisa zvinhu zvebiofertilizers zvichienzaniswa nemakemikari, kugadzira nhema dzenhema uye kuramba kushandiswa kwavo. Fetereza yechinyakare inowedzera makemikari kune zvakatipoteredza, senge heavy metals inowanikwa mukugadzirwa kwayo. Pane rimwe divi, kushandiswa zvine musoro kwebiofertilizers hakuve nemhedzisiro yakaipa pane zvakatipoteredza nekuti kuumbwa kwayo hakuna zvinhu zvinokuvadza.
Mukuwedzera, kushandiswa kwebiofertilizers kunofarira antiparasitic chiito uye kunowedzera kana kudzivirira zvirimwa kubva kune zvipembenene. Ukuwo, fetereza yemakemikari inoita kuti ive gwenga uye inogona kukonzera kurasikirwa kunenge kuripo kwevhu. Pamusoro pe, kushandiswa kwebiofertilizers kunobatsira mukuvandudzwa kwevhu nezvirimwa, uko organic matter uye microorganisms zvinogona kugadzirisa zvinovaka muviri uye kuvandudza chimiro chevhu.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve kushandiswa kwebiofertilizers kurwisa kuora kwevhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Biofertilizer kurwisa kuora kwevhu